Indlela balahle induna izindawo
Inkinga isikhumba inkimbinkimbi izimpilo intsha eningi nangale. Kodwa namuhla, ukwelapha induna ziningi buso abaphumelela ngempela kanye lotions, kodwa balahle nezici induna ngokuvamile kancane nzima, kodwa bakhulise kungenzeka.
Izimbangela induna kungaba ezahlukene. Ezinye zazo yilezi ngenxa yokungondleki kahle, kanti abanye - kuwumphumela ibhalansi hormone. Susa ngezindlela eziningana. Ngemva kwalokho, kubalulekile ukucabanga, ukuthi ukuqeda izindawo emva nezinduna ebusweni.
Ukwelashwa nokuvikelwa amakhambi abantu
Ukuze silungiselele elula kakhulu, futhi ngesikhathi esifanayo ngempumelelo, imaskhi udinga mix nesinamoni noju eziningi alinganayo futhi zisebenza esikhumbeni imizuzu engu-15, bese uxubha ngamanzi afudumele.
Okunye futhi okuhle kakhulu ukuqeda we amabala induna kuzosiza ubumba wezokwelapha. Ukuze-ke ungakwazi ukwengeza amafutha abalulekile kuze mass bushelelezi alube. Sebenzisa lesi imaski kuyadingeka kuphela endaweni ethintekile hhayi imizuzu isikhathi eside kunaleso 10.
Ngakho kanjani ukuqeda izindawo kusukela induna kuhambisana yonke imithetho lilula, ungakwenza usekhaya. amafutha abalulekile kuyoba ngawe abasizi ezinhle. Zonke amaphutha epidermis zinyamalale ngokushesha uma izikhathi eziningana ngosuku ukuba asule ubuso ngamafutha tea tree, ukwatapheya, rosemary noma e-lavender. Kodwa ngezinye izikhathi kuyadingeka ukuze anikeze isikhumba ukuphumula ekusebenziseni kwazo, ngakho abangele ikhanda.
Kuvele ukumnika wenza kusukela parsley - indlela okudingeka bashintshashintshe ngayo futhi engabizi kakhulu ukusiza ukuqeda izindawo ngemva induna futhi rejuvenate isikhumba sakho. Ungenza ice zokwelapha kusukela kule umhluzi, futhi Sula ubuso bakho kabili ngosuku.
Kungabi okungahambi kahle wabe utshwala ukumnika. Ukuze silungiselele ke, udinga ingilazi utshwala ezimbili wezipuni ezinye utshani. Zonke lezi izithako kumele ezixutshanisiwe futhi bagcizelele ngesonto endaweni bavikelekile ukukhanya. Lapho umhluzi usulungile, umane wazesula ubuso.
Phakathi ekwelapheni post-induna kululekwa ukuthatha Vitamin C amasonto amaningana. Awu ukusiza siphungule okhilimu equkethe hydroquinone futhi salicylic, citric futhi acid acidosis.
Kodwa uma unayo imali eyengeziwe futhi kungaba ukukhokhela ukuya beauty salon ukuqeda kuzindawo kusukela induna, ungakwazi, nalobo uyaxebuka chemical, ngokuyisisekelo okuyinto ukuthi ungqimba obonakele phezulu isikhumba iyasuswa. Lena ngempela ukonga futhi inqubo elula, kodwa kunconywa ukuchitha akukho kuka kabili ngenyanga. Ultrasonic uyaxebuka futhi kukusiza ukuba balahle zonke izinto ezingezinhle ukuthi ungaba kuphela epidermis. Ukususa amaseli isikhumba esifile ke ukuthi uhlanzekile kungenxa ephezulu imvamisa umsindo kunyakaza.
Kuyacaca ukuthi wonke umuntu ufuna sibe bahle futhi ayinayo inkinga lapho sihlala esikhunjeni. Kepha uma kwaphulwa amanye ubuso esihlanzekile ngokwemvelo, enye ukuthi nje kudingeka wenze umzamo elengeziwe.
Kungani izindololwane omnyama kanjani ukuxazulula le nkinga?
Indlela ukuqeda nezimvukuzane ekhaya ngokushesha futhi ngaphandle kobuhlungu?
Ikhukhamba imaski kuzosiza ekuxazululeni izinkinga eziningi isikhumba
Ubuso azenze oatmeal iyoba nakakhulu
Luyaqala futhi ephakamisa imaski ngokuba ubuso Sofi Loren - eyisimangaliso isikhumba rejuvenation ithuluzi
Indlela yokuthuthukisa Windows Starter
Ushizi "Black Prince" - umkhiqizo izinga Belarus
Ksenia Borodina ngaphambi nangemva kwesisindo: izimiso okunengqondo umsoco
Ayini ama-abscesses? Izimbangela nezindlela zokwelashwa
Adume Spaniel Russian: incazelo zohlobo
Phinda ukufunda zabuna: Kungaphansi kwaziphi izimo lapho ophoqelelwe uVladimir Dubrovsky ube isigebengu
Ukusika i-Plasma yebhizinisi lakho